Fa maninona no tsy mahomby ny tongotry ny saka ambarako | Noti saka
Fa maninona no tsy mahomby ny tongotry ny saka?
Fa maninona no tsy mahomby ny tongotry ny saka? Ny marina dia ny manontany tena aza fa tena mampiahiahy, satria midika izany fa misy zavatra tsy mety amin'ny namanao volom-borona tsara indrindra ary mila fanampiana haingana araka izay tratra izy.
Amin'izany ao an-tsaina izany dia holazainay aminao ny mety ho antony sy ny fitsaboana azy ireo, amin'izay, dia hainao ny manampy ny saka.
1.1 Ny aretim-pivalanana hypertrophic
1.3 Displasia hip
1.4 Constipation mahazaka
1.6 Antony hafa
3 Fa maninona no mandeha hafahafa ny saka
3.1 Ataxia: ny stagger syndrome
3.2 Claudication: marefo na malemy tongotra
4 Inona no hatao raha hafahafa ny saka ataoko?
Tsy mahafinaritra mihitsy ny mahita ny saka misy olana an-tongotra. Rehefa tonga amin'izany toe-javatra izany izy dia mandany ny ankamaroan'ny andro mandry an-joron-trano, tsy misy lisany. Mba hanampiana anao hihatsara, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mahafantatra ny antony mahatonga ny aretinao:
Ny aretim-pivalanana hypertrophic
Mitranga izany rehefa mihalehibe ny hozatry ny fo, ka miteraka olana aretim-po. Rehefa tsy mandray ra ampy intsony ny faritra samihafa amin'ny vatana, anisan'izany ny tongony aoriana sy ny rambony, dia manomboka malemy izy ireo.
Raha manana ambaratonga siramamy avo lenta ny saka dia milatsaka ny haavon'ny potasioma satria matetika dia mihanaka izy. Milatsaka ireo potasioma ireo miteraka neuropathies izay mety hiteraka olana mandeha.
Na dia mahazatra kokoa aza izany amin'ny alika, dia azo zakain'ny saka ihany koa ny dysplasia hip; na dia amin'ny felines aza dia matetika dia mandova. Mitranga izany rehefa tsy mivoatra araka ny tokony ho izy ny taolana amin'ny valahana sy ny femur, miteraka fanaintainana, tongotra mandringa mandringa, manahirana mihazakazaka na mitsambikina, ary mitrongy.
Fitohanana miteraka vokatry ny tsy fahombiazan'ny voa mety hitarika soritr'aretina toy ny fikororohana ny tongony aoriana ary ny fahasarotana mandeha tsara. Ho fanampin'izany, ny hafa dia mazàna mitranga toy ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana sy / na ny lanja sy ny fandoa.
Vokatry ny rà io izay nijanona tany amin'ny faritra sasany amin'ny vatana. Raha misy eo aoriany dia tsy hahatratra ny tongony tsara ny ra, ka hanjary mangatsiaka izy ireo ary tsy hihetsika firy.
Hitanay ny mahazatra indrindra, fa misy hafa izay tsy azontsika adino:
voan'ny kanseran'ny ra
FIV, na tsimokaretina virus immodeodeficiency
FIP, na peritonitis aretin-koditra
Mazava ho azy, ento any amin'ny veterinera izy. Rehefa tonga any, dia hanome anao fanadinana ara-batana izy, ary mety hanafatra taratra X-na fitiliana fitarafana hafa hahalalana izay tena tsy mety aminao.
Avy eo, hanohy hanome anao fanafody izay hanamaivana (na hanasitranana, arakaraka ny tranga) izy ireo. Raha vaky ny anananao, dia azonao atao ny misafidy ny hodidiana mba hanamboarana azy, ary fehezo ny tongotra.
Ary koa ao an-trano mila manome fitiavana be azy ianao, alao antoka fa mihinana sy misotro tsara izy ary mahazo aina.
Fa maninona no mandeha hafahafa ny saka
Angamba nahatsikaritra ianao fa hafahafa ny saka alehanao, angamba tsy hoe tsy mahomby ny tongony lamosina, fa rehefa mahita azy mandeha ianao dia mahatsapa fa misy zavatra tsy mety.
avy eo Hiresaka aminao momba ny sasany amin'ireo aretina mahazatra indrindra mety hisy fiantraikany amin'ny fandehanan'ny saka izahay. Izy ireo dia aretina izay ho tsikaritrao amin'ny masonao, angamba tsy mahomby ny tongony lamosina, mihetsiketsika izy, sarotra ny mifoha ...
Raha mitranga izany dia tsy maintsy entinao any amin'ny mpitsabo biby ny saka, fa zava-dehibe koa ny hahafantaranao izay mety hitranga aminy.
Ataxia: ny stagger syndrome
Raha sendra ny saka ity dia azonao atao ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo dia manahy fa toa mikainkona ilay vaza. Ataxia dia aretina iray misy fiantraikany amin'ny fandrindrana ny fihetsiky ny saka mahazatra. Tsy tena aretina izy io fa famantarana kosa ny fahasimbana na ny tsy fahombiazan'ny ati-doha izay mifandray mivantana amin'ny fihetsehana. Mety ho teraka hatrany am-bohoka izy io.
Izany dia fikorontanan'ny rafi-pitabatabana ary ny saka dia manova ny fifandimbiasan'ny hozatra, indrindra amin'ny tendrony. Misy karazana ataxia isan-karazany:
Cerebellar ataxia. Ny saka dia manana fahasarotana ao amin'ny cerebellum (faritra misy ny fifandanjana sy ny fandrindrana ny hetsika).
vestibular ataxia. Misy olana amin'ny sofina anaty na ao amin'ny hozatra izay mivoaka amin'ny sofina mankany amin'ny ati-doha. Afaka mitanondrika ny lohany ny saka ary mampihetsika hafahafa ny masony. Afaka mifindra anaty boribory izy ireo na mankany amin'ny sisiny. Afaka mahatsapa metatra sy mandoa mihitsy aza izy ireo.
Ataxia mahatsapa. Mitranga izany rehefa misy ny olana eo amin'ny ati-doha, tadin'ny hazon-damosina ary / na ny hozatry ny peripheral izay tompon'andraikitra amin'ny fampifandraisana ny tendrony sy ny ati-doha. Afaka mandeha miaraka amin'ny tongony mivelatra be ny saka.
Claudication: marefo na malemy tongotra
Tsy fanarahan-dalàna izany rehefa mandeha amin'ny saka ary miseho ihany koa rehefa tsy afaka mitsambikina amin'ny toerana avo ny saka. Ny fepetra mahazatra indrindra dia ireo izay horesahintsika etsy ambany.
Ratra amin'ny tongotra. Mety misy ratra amin'ny pads ianao.
Naratra taolana. Izy io dia mety hiteraka olana amin'ny fanaovana kajy.
Ratra mitambatra. Matetika izy ireo dia mamaivay.
Fiovan'ny hozatra na fanovana.
Fanovana ara-tsakafo toy ny vitamina A be loatra
Inona no hatao raha hafahafa ny saka ataoko?
Manaraka izany dia haneho hevitra momba hevitra vitsivitsy azonao atao izahay raha hafahafa ny saka ataonao ary tsy fantatrao izay mety hitranga aminy.
Manontania dokotera. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny miresaka amin'ny mpitsabo anao ary hazavao ny zava-mitranga amin'ny tsainao.
Jereo raha misy soritr'aretina. Jereo ny fiheveran'ny saka anao, ny fandehany, na ny fandehany mba hahitanao fa tsy misy tsy fetezana.
Fanaraha-maso ny fantsika. Halaviro ny ratra amin'ny pad satria mety ho ratsy ny hoho ary mihady ao anaty pad.
Halaviro ny ratra amin'ny tongotra. Zava-dehibe ny hikarakaranao ny sakao sy hanakanana azy ireo tsy hijaly noho ny ratram-po ao amin'ny fonosin'izy ireo. Ankoatry ny fisorohana ny loza mety hitranga. Ny saka dia tsara kokoa ny mivoaka ivelan'ny trano araka izay azo atao.
Na izany na tsy izany, na mieritreritra ianao fa mandeha hafahafa ny saka na manana olana amin'ny tongotra aoriana, dia mila manatona ny mpitsabo anao ianao mba hahafahan'izy ireo manao tombana amin'ny fahasalamana faran'izay haingana. Hanome anao fandinihana akaiky ny manjo anao izy ireo.
Amin'ny tranga sasany dia ilaina ny mamantatra mialoha mba hisorohana ny olana amin'ny neurolojia sy ny lalan-dra na inona na inona, na koa ny olana amin'ny taolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Fa maninona no tsy mahomby ny tongotry ny saka?
Inona avy ireo soritr'aretina sy fitsaboana ny jaundice amin'ny saka?